बिजनेस होम – Page2– rastriyakhabar.com
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट आएका बजेटसँग सम्बन्धीत विभिन्न तीन विधयेक पारित गरेको छ । सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएका “आर्थिक विधेयक, २०७७”, “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७” र “ऋण तथा जमानत विधेयक, २०७७” लाई पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विधेयकको..
आज काठकाडौंमा विभिन्न स्थानमा विद्युत अवरुद्ध हुने
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी लीला अर्यालका अनुसार जीर्ण अवस्थामा रहेका पोल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् काटिन लागेको हो । प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, “महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको गणेशथान फिडरबाट..
काठमाडौं। जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर मल्लसहित ८ जनाविरुद्ध १ करोड ८२ लाख बीगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका प्रमुख अमरबहादुर मल्लसहित आठ जनाविरुद्ध कर्मचारी नियुक्ति र कार्यालय भवन..
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन साउन २५ र २६ गते हुने
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन साउन २५ र २६ गते हुने भएको छ। आज बसेको महासंघको पदाधिकारीको बैठकले निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरेको हो। महासंघको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सर्वसम्मत रूपमा साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयलाई सोमबार बस्ने कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन..
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको..
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बिहीबार आर्थिक तथा रोजगारी, सामाजिक विकास, शहरी पूर्वाधार तथा योजना विकास, वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासन नीतिलगायतका..
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियमित बजेट ल्याएको १५ दिन नबित्दै सरकार दैनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । बजेटमा उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए । तर मन्त्रालयगत छलफलको प्रतिउत्तर भाषणामा उनले सरकार लगभग टाट पल्टिएको स्वीकार गरे..
रसुवागढी नाकाबाट आयात सुचारु गर्न चीनले दियो सहमति
काठमाडौं। रसुवागढी नाकाबाट हुने आयातलाई सुचारु गर्न चीनले सहमित दिएको छ । रसुवागढी नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । केरुङ नाका खुल्ने भएपछि अहिले व्यापारीहरु उत्साहित भएका छन् । उनीहरु नाका सुचारु भएलगत्तै सीमापारी रोकिएका सामान ल्याउने तयारी..
लकडाउनको असर– ४ प्रतिशतमा सीमित भयो बैंकिङ कारोबार
काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधिमा बैंकिङ कारोबार घटेको छ । चैत ११ गतेदेखि लकडाउन लागू भएसँगै सर्वसाधारणहरु बैंकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । जसरकार अहिले बैंकिङ कारोबार ९६ प्रतिशतले कम भएको छ । लकडाउन भएपछि..
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्यायो ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट
काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको छ । सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अगामी आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ १४ अर्ब १८ करोड..
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७ पारित
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेका ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरुले..
वाग्मती प्रदेशमा बजेटः ५० अर्ब हाराहारीको बजेट
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । आगामी असार १ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा लकडाउनका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने, कृषि उत्पादन बढाउने तथा उद्यामशीलता वृद्धि गर्नेखालका योजना समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा..